समाचार – xem-bao-viet
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on प्लटिङ खनेर तरकारी खेती
एक दशकअघिसम्म कीर्तिपुरको सल्यानथान–४ स्थित कुटुम्ब बस्तीको अधिकांश भू–भाग खेतीयोग्य जमिन थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा ठूला–ठूला घर ठडिएका छन् । बाँकी जमिन पनि प्लटिङ गरिएको छ । कुनै समय धान र विभिन्न तरकारी फल्ने जमिन प्लटिङ गरेपछि वर्षौंदेखि बाँझो छन् । यसरी लामो समय बाँझो रहेका केही जमिनमा यतिबेला भने तरकारी उम्रेका देखिन्छन् । […]
नेपाल टेलिकम र एनसेल- महामारीका बेला राम्रो मुनाफा कमाउने दुई ठूला दूरसंचार कम्पनी हुन्, नेपाल टेलिकम र एनसेल । नेपाल टेलिकमले सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा ७ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा आर्जन गरेको नाफाभन्दा ४ दशमलव २७ प्रतिशत कम भए पनि कोभिड–१९ महामारीका बेला टेलिकमले […]
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on राइडरलाई रोजीरोटीकै समस्या
रौतहटमा लामो समय अध्यापन गरेर काठमाडौं आएका हितलाल मुखियाले केही समय काठमाडौंको विद्यालयमा कक्षा ९ र १० लाई विज्ञान विषय पढाए । दुई छोरा, एक छोरी, श्रीमती र आफू गरेर पाँच जनाको परिवार अध्यापन पेशाबाट सजिलै नचल्ने भएपछि उनले पठाओको राइडिङ एप डाउनलोड गरे र दुई पाङ्ग्रे सवारीमा राइडिङ सेवा दिन सुरु गरे । आम्दानी […]
सुनकोशी गाउँपालिका–१ ओखलढुंगाकी एक महिला गत असार पहिलो हप्ता भारतको सिक्किमबाट घर आइन्। रोजगारीको सिलसिलामा सिक्किमबस्दै आएकी उनी कोरोनाका कारण असहज परिस्थिती भएपछि गाउँ फर्किइन्। उनी गर्भवती समेत हुन्। उनलाई घर भन्दा करिब आधा घण्टा टाढा रहेको एउटा आधारभुत विद्यालयमा निर्माण गरिएको राखियो। विद्यालय सुरक्षाको दृष्टिले जोखिम र एकान्त ठाउँमा थियो। मानिसहरुको आवतजावत कमहुने भएकाले […]
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on कुलमान किन ?
अहिले देश पूरै कुलमानमय भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उनको समर्थनमा बोल्नेहरू देखिन्छन्। मिडियामा पनि उनीसँग सम्बन्धित समाचार, विचार, अन्तर्वार्ता आइरहेका छन्। कुलमान स्वयं भने आफ्ना समर्थकलाई कोरोना महामारीका बेला बाहिर ननिस्कन आह्वान गरिरहेका छन्। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? यसको समाजशास्त्रीय तथा राजनीतिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बहस हुनुपर्ने देखिन्छ। हामी नेपालीले अनेकतन्त्र […]
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को महिला क्रिकेटमा माल्दिभ्सको नाममा क्रिकेट इतिहासमै सबैभन्दा लाजमर्दो रेकर्ड कायम भएको छ । महिला टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा कम स्कोरमा अलआउट भएको रेकर्ड माल्दिभ्को नाममा दर्ता भएको हो ।आज भएको बंगलादेशविरुद्धको खेलमा माल्दिभ्स ६ रनमै अलआउट भएको छ । आजको खेलमा बंगलादेशले माल्दिभ्समाथि २४९ रनको फराकिलो जित हात पारेको छ […]
December 4, 2019 September 27, 2020 adminLeaveaComment on टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए
भारतिय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली टेस्ट वरियताको शिर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। आईसीसीले जारी गरेको नयाँ वरियतामा अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथलाई पछि पार्दै कोहली शिर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन्। यसपटक वरियतामा ठूलो छलाङ मारेका छन्। उनी १२ स्थान माथि उक्लिँदै वरियताको ५ औं स्थानमा आएका छन्। यस्तै अष्ट्रलियाकै अर्का खेलाडी मार्नस लाबुसने आठौं स्थानमा आएका छन् […]
December 2, 2019 September 27, 2020 adminLeaveaComment on नेपाली महिला क्रिकेट अझै पनि सरकारको आँखामा पर्न सकेको छैन – अन्जली चन्द
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गतको महिला क्रिकेट सोमबारदेखि पोखरा रङ्गशालामा सुरु भएको छ ।पहिलो दिन भएको खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई १० विकेटले पराजित ग¥यो । यसो त यो खेल माल्दिभ्सको पहिलो अन्तराष्ट्रिय खेल थियो ।पहिलो खेलमा नेपालका लागि डेब्यू गरेकी खेलाडी अञ्जली चन्द खेल सकिएपछि चर्चामा आइन् । कारण थियो नयाँ विश्व कीर्तिमान । उनले २.१ ओभर […]